သင်ဒီမှာပါ: Home / အဘို့အမော်ကွန်း recycling Solutions / ဘက်ထရီ
ပြင်သစ် - ငါတို့သည်ပြန်သုံးဘက်ထရီစကားပြောနေကြသည်အချိန်အများစုမှာကအဖိုးတန်သတ္တုများပြန်လည်ရယူနိုင်ရန်အတွက်သူတို့ကိုကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ မ Farouk Tedjar စနစ်ဖြင့်။ သူ၏အမှုစနစ် ပို. Eco-ဖော်ရွေပါ! ငါသည်သူ၏အံ့သြဖွယ်တီထွင်မှုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်!